Tsy fandriampahalemana : milaza ho misy mandrahona isan’andro ny filoha | NewsMada
Tsy fandriampahalemana : milaza ho misy mandrahona isan’andro ny filoha
Mampiteny ny moana sy mampitampim-bava ny tsy fandriampahalemana. Na ny filoha aza, milaza ho misy mandrahona isan’andro.
“Miatrika fampitahorana ataon’ny sasany ny filoham-pirenena isan’andro isan’andro, miatrika izany fandrahonana ataon’ny hafa izany, miatrika izany famendrofendroana ataon’ny hafa isan’andro izany.”
Io ny kabarin’ny filoha Rajaonarimampianina tamin’ny fanomezana fanamiana miisa 2 000 ireo miaramila zazavao teny amin’ny Capsat, Soanierana, omaly. “Fa sahy mijoro izaho filoham-pirenena, ary mitarika”, hoy izy. Mpialoha lalana ny rehetra hatrany ny filoham-pirenena.
Ady no atrehina eto amin’ny firenena isan’andro. Iainana ny tsy fandriampahalemana na an-tanàn-dehibe na any ambanivohitra. Heveriny fa hitondra fitoniana sy filaminan-tsaina ho an’ny vahoaka malagasy ny fanomezan-danja ny fanapahan-kevitra matotra nataon’ny miaramila amin’izany.
Mampisa ny tetika rehetra ny mpampihorohoro
Efa ampiasain’ny mpampihorohoro ny tetika rehetra amin’izao fotoana izao mba hiadiana. Raitra lavitra noho izay an’ny Tafika ny fitaovana ampiasain’ny Tafika misy manerana an’izao tontolo izao, na eto Madagasikara io na any am-pitan-dranomasina.
Ny dikan’izany, aza matoritory ary aza zatra mionona fotsiny amin’ny tetika natao tany am-pianarana. Goavana ny fialohavan-dalana ny atao amin’izay hitranga sy ny fahaizana mandanjalanja hitarika amin’ny asa.
Mila andefasana olona any amin’ireny faritra saro-pady, omena antoka ny olona. Mila zava-mivaingana izany ao anatin’ny tamberin’andraikitra. Andrasan’ny vahoaka malagasy amin’ny miaramila izay. Na inona na inona fahasahiranana, hanampy ny miaramila ny fitondram-panjakana. Mila mijoro amin’ny andraikiny ny miaramila: mifanome hevitra, tsy mifampiandry.
Manao vain-drahalahy tsy marary
Fampitahorana, fandrahonana, famendrofendroana izany no mahazo ny filoha. Vao mainka izay mihatra sy iainan’ny vahoaka ifotony isan’andro vaky? Miady irery, tsy manana afa-tsy tanam-polo, very fanahy mbola velona amin’ny tsy fandriampahalemana…
Tsy hita sy tsy tsapa hatramin’izao izay hoe mpitandro filaminana miaro ny vahoaka sy ny fananany. Misy aza ny manjakazaka any amin’ny tany lavitra fanjakana foibe. Sao sanatria mbola hanampy isa indray ny herim-pamoretana miaro ny mpitondra sy toerany, fa resaka tian-kateza ihany?